အားလပ်ရက်ရာသီအတွက်စစ်ပွဲ - Q4 ရှိ Google Shopping နှင့် Amazon ကုန်ပစ္စည်းကြော်ငြာများ Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ 21, 2013 Andrew Davis
သူတို့က“ မင်းပိုက်ဆံကိုမင်းပါးစပ်မှာထားလိုက်ပါ” လို့ပြောတယ် ကောင်းပြီ၊ လမ်းပေါ်ရှိစကားလုံးများနှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်လမ်းမများပေါ်တွင်မဆိုဂူဂဲလ်နှင့်အမေဇုံသည်အွန်လိုင်းလက်လီရောင်းဝယ်မှုတွင်သင်၏ငွေရှာသူဖြစ်သည်။ Google Shopping နှင့် Amazon Product Ads တို့သည်တည်ရှိပြီးဖြစ်သောအရှိန်အဟုန်အရှိဆုံး၊ အခကြေးငွေ ပေး၍ နှိုင်းယှဉ်ထားသောစျေးဝယ်သည့်အင်ဂျင်များ (၂) ဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ ဒါပေမယ့်လူတိုင်းသိတယ်။ အများအားဖြင့်မသိသောအချက်များမှာ CSE ကုမ္ပဏီကြီးများ၏မြေအောက်အဆင့်များ - အချက်အလက်များ။ အဆိုပါထုတ်ဖော်အမှန်တရားတွေ။
Q4 တွင်မည်သည့် CSE သည်ထိပ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သနည်း။ CPC မဟာဗျူဟာ Google Shopping နှင့် Amazon Product တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်သည် အသွားအလာ၊ အပြောင်းအလဲနှုန်းနှင့်ကလစ်တစ်ချက်လျှင်ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်များကဲ့သို့သောသိသာထင်ရှားသည့်မက်ထရစ်ပေါ်အခြေခံပြီးကြော်ငြာ။ ကြည့်ရအောင်
မထိတ်လန့်ပါနဲ့။ Amazon ၏အသွားအလာသည် Q3 တွင်ကျဆင်းသွားခြင်းမဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့အတော်လေးဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ Google Shopping ၏ traffic သည်အလွန်မြင့်မားသဖြင့် Amazon ၏ traffic သည်အတော်လေးသေးငယ်သည်။ အမေဇုန်ထက်ဂူးဂဲလ်ကအွန်လိုင်းလက်လီအရောင်းဆိုင်များသို့အသွားအလာ ၁၄၄% ပိုပေးခဲ့သည် ဒါကအသွားအလာပမာဏထက်နှစ်ဆကျော်ပါတယ်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ လေးလပတ်အတွင်း Google အတွက်သိသိသာသာတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်လေးလတွင်ဂူးဂဲလ်သည်ကုန်သည်များကို ၉၆% ပိုမိုပို့ဆောင်ပေးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ရုတ်တရက်ခြားနားချက်? Shopzilla နှင့် Shopping.com ကဲ့သို့သောအခြား CSE များသည် Google ၏ကြီးမားသောအသွားအလာရေကန်ကိုသတိပြုမိပြီးစျေးဝယ်ခြင်းတွင်ထုတ်ကုန်များကိုစတင်ကြော်ငြာလာသည်။ ယာဉ်ကြောအနိုင်ရရှိသူ - Google Shopping ။
ဒီနေရာတွင်2ပconflictိပက္ခဖြစ်လမ်းကြောင်းများကြည့်ပါ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်လေးလတွင် Google Shopping ၏ပြောင်းလဲမှုနှုန်းသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်လေးလတွင် ၃.၁% မှ ၂.၄% သို့တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းခဲ့သည် တစ်နှစ်အတွက် 22.35% ကျဆင်း။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကျွန်ုပ်တို့တွင် Amazon ရှိကြသည်။ သူသည်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်လေးလတွင် ၁.၈% မှ ၂.၂% တွင် ၂.၂% သို့မြင့်တက်ခဲ့သည်။aတစ်နှစ်လျှင် 57.5% တိုး.
အဘယ်ကြောင့်ခြားနားချက်? ဂူးဂဲလ်ကပေးဆောင်သော CSE မော်ဒယ်ကိုပြောင်းလဲပြီးကတည်းကကုန်သည်လေလံများသည်လက်လီရောင်းချသူများ၏ထုတ်ကုန်များနှင့်သူတို့၏ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းများကိုမည်မျှထိထိရောက်ရောက်အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုသိသာထင်ရှားလာသည်။ ငွေလဲနှုန်းအနိုင်ရရှိသူ: အမေဇုံကုန်ပစ္စည်းကြော်ငြာ။
တစ်ချက်လျှင်ကုန်ကျစရိတ်သည် Google အတွက်အယူအဆသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်တရားဝင်အောက်တိုဘာလတွင်လအနည်းငယ်အကြာတရားဝင်ပေးရသောကြောင့် ၂၀၁၁ Q4 - ၂၀၁၂ ဒုတိယသုံးလပတ်တွင် Google ၌ပျမ်းမျှ CPC မရှိပါ။
သို့သော် CPC သည် Q3 တွင်ပေးချေသော Google Shopping အသစ်နှင့်အဓိကကျသည့်အချိန်တွင် Amazon ထက်နိမ့်ကျပြီး Q4 တစ်လျှောက်ပျမ်းမျှ CPC မှဒေါ်လာ ၀.၃၀ မှ ၀.၃၁ သို့ရွေ့သွားခဲ့သည်။ အမေဇုံ၏ပျမ်းမျှ CPC သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအနည်းငယ်တိုးတက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်လေးလတွင်ဒေါ်လာ ၀.၃၃ မှစတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်လေးလတွင်ဒေါ်လာ ၀.၄၁ အထိတိုးတက်ခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည့်အချက်မှာ Google ၏ပျမ်းမျှ CPC သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် Q0.30 တွင် Amazon ထက် ၃၂.၅% စျေးသက်သာသည်။ CPC ဆုရှင် - Google Shopping ။
အမှန်တကယ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ရောင်းဝယ်မှု၊ ဝင်ငွေနှင့်အင်ဂျင်တုန့်ပြန်မှုစသည်တို့ကဲ့သို့သောအခြားသိသာထင်ရှားသည့်မက်ထရစ်ကိုတောင်မကြည့်သေးသော်လည်း၊ Google Shopping သည်ယခုတိုင်ခိုင်မာနေဆဲဖြစ်သည်။ အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံ ( CPC မဟာဗျူဟာဘလော့ဂ် အငယ်ဆုံးလစာအင်ဂျင်ဖြစ်သော်လည်းဂူးဂဲလ်သည် Q4 တွင်ပထမဆုံး CSE အဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့သည်။
ဒါကလက်လီအရောင်းဆိုင်များအတွက်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ သင်ယခုပြင်ဆင်နေသင့်သည့်သင်၏အားလပ်ရက်စျေးဝယ်ရာသီမဟာဗျူဟာသည်အားလပ်ရက်များအတွင်းပြင်းထန်သောပြိုင်ဆိုင်သူနှင့်ငွေရှာသူဖြစ်သောကြောင့်ယခုသင် Google Shopping ကိုအဓိကအာရုံစိုက်သင့်သည်။
22:2013 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 2, 40
ဂူဂဲလ်စျေး ၀ ယ်ကြော်ငြာများသည်ပိုမိုကြည့်ကောင်းပြီးအာရုံစူးစိုက်လျှင်ပင်ကျွန်ုပ်၌ Amazon အကောင့်တစ်ခုတည်ထောင်ထားပြီးစျေးနှုန်းများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာသည် (ကျွန်ုပ် ၀ ယ်ခဲ့သည့်အရာများအတွက် ၁၀ ကြိမ်အနက် ၉ ဆ) .. ၂ ခလုတ် နှိပ်၍ စာထဲတွင်ပါသည်။
22:2013 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 11, 00